Kalipheli isasasa kwiBMW 4 Series
Fanelesibonge Bengu | July 19, 2021
IMOTO: BMW 420d M Sport
NAPHEZU kokuthi sekwaphela izinyanga eziyisikhombisa iBMW 4 Series entsha yethulwa ngokusemthethweni eNingizimu Afrika kodwa namanje ukuphawula ngegrille yayo akukapheli.
Ukukhhuluma kwasuka kusavezwa izithombe zayo kwaqhubeka ngesikhathi ifika kanti namanje imibono isahlukene. Ubona ngisho uqhamuka abantu beqhwebana bekhombisana ngayo nokungenye yezinto igrille eyenzayo - iyayigqamisa.
IBMW 4 Series Coupé yethulwa emhlabeni ngo-2013 futhi ingenye yezintandokazi kubathengi bamaBMW ngenxa yokubukeka sporty kwayo.
Ibanga abathengi ne-Audi A5, Mercedes-Benz C-Class Coupé nezinye.
Ubuhle buya ngomuntu kodwa mina ngiyibona iyinhle i-4 Series. Ikhanyisa ngama-Adaptive LED headlights owafaka uma uthanda futhi ifakwe amarimu angu-19 inch.
Ngaphakathi ishaya ngezihlalo zesikhumba ezi-cream futhi ezangaphambili zihlelwa ngogesi. Engikuthandile ngayo ukuthi ivulekile abagibeli bahlala ngokukhululeka. Njengoba inezicabha ezimbili nje, uma ungena uyohlala ngemuva kumele wenze isiqiniseko sokuthi uyagoba ukuze ungashayi ekhanda ngoba imfishane. Ibhuthi nayo inkulu kodwa uma uthanda uyakwazi nokulalisa izihlalo ukuze isikhala sande.
Ngaphambili kune-touchscreen infotainment system nokuyilapho udlala khona umsakazo noma uxhume iselula nge-Apple CarPlay ngentambo. Njengoba kunezibhelu nje kulezi zinsuku, ngivule inkombandlela nokuthe uma kunezinto emgwaqweni yangitshela kusanesikhathi futhi yasho nangesiminyaminya ebengizozithela kuso. I-screen sibuye siveze umzimba uma upaka futhi inama sensor ngaphambili nangemuva.
I-instrument cluster idigital kodwa uma ungafuni ukuyibuka, ezinye izinto zivela kwiwindscreen kwazise bayifake iHead-up Display.
Emgwaqweni ihamba ngenjini kadizili engu-2.0 litre. Inamandla angu-140kW ne-torque engu-400Nm. Ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwana engu-7.1 kanti ijubane elikhulu ngu-240 km/h.
Kuningi okuthandekayo ngayo ngoba inamandla owathola kalula futhi iyonga injalo. Bheka ngoba ngo-100km, ilokhu nje iziphuzela amalitha angu-5.9 futhi uma igcwele, ikutshela ukuthi ungahamba ibanga elicela ku-800km.
Intofontofo, ithule ngaphakathi futhi emakhoneni iyabambelela. Ukuthatha ibanga elide akuyona nje into enqenisayo ngayo ngenxa yokuba ntofontofo kwayo. Iphinde ibe ne- cruise control ukuze uzishushuluzele kahle futhi no-gearbox oyi-eight-speed Steptronic transmission ushintsha ngesikhathi esifanele.
IBMW 420d ngiyibona ikahle ngokuthi iyabukeka futhi okumnandi kakhulu ukuthi inamandla yize ibe yonga nakudizili.
BMW 420d M Sport Package - R894 100